Tsy mahafa-po ny asan’ny mpitondra : “Tokony hijoro ny mpanohitra”, hoy ny Sefafi | NewsMada
Tsy mahafa-po ny asan’ny mpitondra : “Tokony hijoro ny mpanohitra”, hoy ny Sefafi
Mby aiza ny asan’ny mpitondra amin’izao fotoana izao? Mitaky ny fijoroan’ny mpanohitra ny Sefafi.
“Tokony hijoro ny mpanohitra. Nahoana no tsy misy an’izany? Nefa voasoratra ao amin’ny lalàmpanorenana fa omena toerana sy hasina ny mpanohitra. Tokony hisy sahy hijoro sy hiteny hoe mpanohitra.”
Tenin’ny mpandrindra nasionalin’ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi), Andriamandranto Ralison, teny Ambodivona, omaly, io, tamin’ny fivoahan’ny tahirin-kevitra faha-14, mirakitra ireo fanambarana ny taona 2015 hoe “Manotrika atody lamokany”.
Nahoana, ohatra, ny loholona rehetra no saika nifidy ny kandidà ho filohan’ny Antenimierandoholona natolotry ny antokom-pitondrana? Tsy nisy sahy nijoro sy niteny hoe mpanohitra. Tsy mahamenatra ve ny mifidy ny kandidà tokana natolotry ny fitondrana, fa tsy misy mpanohitra?
“Afaka taona vitsy, ho tonga ny fifidianana filoham-pirenena. Nefa tsy misy sahy miteny hoe mpanohitra. Nefa manao fanoherana amin’ny endrika hafa: arakaraka ny tombontsoa”, hoy izy.
Tsy mbola mandeha ny fiainam-pirenena
Tsy mbola mandeha ny fiainam-pirenena, roa taona izay… Eo ny tsy fandriampahalemana, ambany ny fahefa-mividin’ny vahoaka, miroborobo ny fahalovana sy ny kolikoly… Mitombo ny hantsana manelanelana ny fitondram-panjakana amin’ny vahoaka. Izay no nahatonga ny hoe nanotrika atody lamokany ny firenena malagasy, fa mandiso fanantenana ny vahoaka ny asan’ny mpitondra.
Amin’izany, mifampitazana fotsiny ny samy mpanao politika, ny vahoaka sy ny mpitondra, indrindra ny samy mpitondra: tsy izay nampanantenainy sy andrasan’ny vahoaka aminy no ataony, fa izay arakaraka ny tombontsoany.
Tsy mbola misy demokrasia koa eto. Miara-mirona arakaraka ny tombontsoa na izay misy izany ny mpanao politika. Efa manomana ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018 izao ny sasany, fa tsy misy mijoro na mety na tsia ny ataon’ny mpitondra: manaraka ambokony fa ny tombontsoa ao ambadika no tsinjovina.
Tsy ao an-tsain’ny mpitondra sy ny mpanao politika ny vahoaka, fa lamokany hatrany ny atody nakotrika. Rehefa diso fanantenana ny vahoaka, ahina ny zava-kitranga… Hararaotin’ny mpitondra sy ny mpanao politika koa izany. Noho izany, mila samy mandray andraikitra tandrify azy avy ny tsirairay.